THAT HTUN OO၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
THAT HTUN OO
THAT HTUN OO's Apps
THAT HTUN OO's Likes
THAT HTUN OO's ၏မိတ်ဆွေများ
THAT HTUN OO's Groups
THAT HTUN OO's Discussions
pusan york myanmar
Started this discussion. Last reply by THAT HTUN OO Aug 26, 2012. 1 Reply 1 Like
အနေနီးပေမဲ. အဝေးနေမဖြစ်ပါစေနဲ.မြတ်ဗုဒ၏ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာသည်အဘယ်သောနေရာတွင်ထွန်းကားနေသော်ငြား မိမိရင်တွင်းသာသနာတည်းဟူသောစေတီမတည် သရဏဂုံ မတည် သာသနာသုံးရပ်မတည်လျှင် အနေနီးသောလဲအဝေးကနေသောသူနှင်.တူ၏.....ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
THAT HTUN OO သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
THAT HTUN OO၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ
myomin သည် THAT HTUN OO's၏ 'နတ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
myomin သည်THAT HTUN OO's ၏ 'နတ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
kham သည်THAT HTUN OO's ၏ 'နတ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ကိုငယ် သည်THAT HTUN OO's ၏ 'နတ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
nyansoe သည်THAT HTUN OO's ၏ 'နတ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်THAT HTUN OOကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"​ပျောက်​​နေတာ ကြာ​ပေါ့။ အခုမှ ပြန်​​တွေ့ရပါလား။ အလုပ်​အကိုင်​ ကျန်းမာ​ရေး အစစအဆင်​​ပြေတယ်​ မဟုတ်​လား။ ၁၉.၁.၂၀၁၄ ရက်​​နေ့မှာ အကို့ဆိုဒ်​ ၃ နှစ်​ပြည့်​ အထိမ်းအမှတ်​ အလှူကျင်းပရန်​ ရှိပါတယ်​ ။ ​ပျော်​ရွှင်​ချမ်း​မြေ့ တရား​တွေ့ပါ​စေ"
လှိုင်ကျော်ထွေး သည် THAT HTUN OO's၏ 'နတ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"မျှ​ဝေမှုအတွက်​​ကျေးဇူးပါ။ ​နောင်​လဲ ဆက်​လက်​ မျှ​ဝေပါဦး"
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်THAT HTUN OO's ၏ 'နတ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
THAT HTUN OO သည်ဘလော့တင်သွားပါသည်။
နတ် နတ်ဟူသည် မြန်မာစကား“နာထ”ဟူသော ပါဠိမှ ဆင်းသက်လာသည် ဟု ဝေါဟာရလိနတ္တဒီပနီကျမ်းက ဖွင့်ဆိုထားသည်။နာထ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်မှာ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သည်။ လောကီ၊ လောကုတ္တရာ အကျိုးတို့အတွက် လူသားတို့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သောကြောင့် “နာထ”၊ “နာတ်”၊ “နတ်”ဟု ခေါ်ဆိုနေကြသည်။ နတ်ကို ပါဠိဘာသာအားဖြင့် “ဒေဝ”ဟု၍၎င်း၊ “ဒေဝတာ”ဟု၍၎င်း ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ပဋ္ဌာန်းမူလ ဋီကာကျမ်း ဝိသုဒ္ဓိမဂ် မဟာဋီကာကျမ်းတို့၌-လူသားတို့အား ရာထူးဌာနန္တရ စသော စည်းစိမ်ဥစ္စာကို ပေးတတ်သူ၊ လူသားတို့ ပူဇော်သက္ကာရကို ခံယူထိုက်သူ၊ အကျိုးတရားပြ၍ ညွှန်ကြားဆုံးမတတ်သူ၊ ပျက်စီးခြင်း…See More
THAT HTUN OO shared their blog post on Facebook
လင်းကိုကို သည်THAT HTUN OO's ၏ 'အကြောင်းနဲ.အကျိုး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Zayar သည်THAT HTUN OO's ၏ 'အကြောင်းနဲ.အကျိုး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
အနန္တငါးပါးဂုဏ်ရည်ကိုရည်မှန်းလျက်ရှိခိုးဦးညွှတ်ပါသည် ဘုရားရှင်က လောကအရာမကြံစည်ကြနှင်.လို.မိန်.မှာတော်မူခဲ.တယ် ထိုသို.ကြံစည်နေမည်.အစား ရင်ဝမှာဆူးနစ်နေတဲ.ကိလေသာနဲ.တူတဲ.မြှားကိုအလျင်အမြန်ဆွဲထုတ်ကြဖို.မိန်.မှာတော်မူခဲ.ပါတယ် အဝိဇ္ဇာ မသိလို.လိုချင်သင်္ခါရပြုလုပ်တဲ.အတွက်ကြောင်. ခန္ဓာငါးပါးရရှိကြတယ် ရရှိတော.စွဲလမ်းတက်မက် ငါ.ခန္ဓာ. ငါ.ဥစ္စာ ငါစွဲစွဲတကယ်တမ်းကျတော. ငါဆိုတာမရှိ ဝေဒနာသည်လည်းငါမဟုတ် ဓါတ်ကြီးလေးပါးဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင်. ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ် ဝေဒနာရဲ.အပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို.က အဓိက…See More
THAT HTUN OO သည်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) သည်THAT HTUN OOကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"အလှူငွေလက်ခံသူကတော့ အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) ပါ..."
THAT HTUN OO's ၏ဓါတ်ပုံများ
THAT HTUN OO's Blog
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 28, 2013 တွင်2:00am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments5Likes
နတ် နတ်ဟူသည် မြန်မာစကား“နာထ”ဟူသော ပါဠိမှ ဆင်းသက်လာသည် ဟု ဝေါဟာရလိနတ္တဒီပနီကျမ်းက ဖွင့်ဆိုထားသည်။
ဒီဘလော့ကို မတ် 12, 2013 တွင်8:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments3Likes
အနန္တငါးပါးဂုဏ်ရည်ကိုရည်မှန်းလျက်ရှိခိုးဦးညွှတ်ပါသည် ဘုရားရှင်က လောကအရာမကြံစည်ကြနှင်.လို.မိန်.မှာတော်မူခဲ.တယ် ထိုသို.ကြံစည်နေမည်.အစား ရင်ဝမှာဆူးနစ်နေတဲ.ကိလေသာနဲ.တူတဲ.မြှားကိုအလျင်အမြန်ဆွဲထုတ်ကြဖို.မိန်.မှာတော်မူခဲ.ပါတယ် အဝိဇ္ဇာ မသိလို.လိုချင်သင်္ခါရပြုလုပ်တဲ.အတွက်ကြောင်. ခန္ဓာငါးပါးရရှိကြတယ် ရရှိတော.စွဲလမ်းတက်မက် ငါ.ခန္ဓာ. ငါ.ဥစ္စာ ငါစွဲစွဲတကယ်တမ်းကျတော. ငါဆိုတာမရှိ ဝေဒနာသည်လည်းငါမဟုတ် ဓါတ်ကြီးလေးပါးဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင်. ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ် ဝေဒနာရဲ.အပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို.က အဓိက…
10:13am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 28, 2013, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
​ပျောက်​​နေတာ ကြာ​ပေါ့။ အခုမှ ပြန်​​တွေ့ရပါလား။ အလုပ်​အကိုင်​ ကျန်းမာ​ရေး အစစအဆင်​​ပြေတယ်​ မဟုတ်​လား။ ၁၉.၁.၂၀၁၄ ရက်​​နေ့မှာ အကို့ဆိုဒ်​ ၃ နှစ်​ပြည့်​ အထိမ်းအမှတ်​ အလှူကျင်းပရန်​ ရှိပါတယ်​ ။ ​ပျော်​ရွှင်​ချမ်း​မြေ့ တရား​တွေ့ပါ​စေ
8:32pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 27, 2013, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အလှူငွေလက်ခံသူကတော့ အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) ပါ...
3:13pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 14, 2013, တွင် ကောင်းမြတ်ဇော် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကိုသက်ထွန်းဦးေ၇ကျေးဇူးပြု တချက်လောက်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ။ kaungmyatster@gmail.com or +6583283985 or same no in viper. အလှူငွေနဲ့ပက်သက်လို့ ကို၇ဲမင်းသူကမအားလို့ငွေမထုတ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ ကိုကျော်လှိုင်ထွေးရှိကို အဆင်ပြေ၇င် နာမည်လွဲပေးလိုက်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကိုရဲ့ပြန်စာကိုစောင့်မျော်နေပါတယ်။
4:14pm အချိန်အောက်တိုဘာ 30, 2012, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
8:57pm အချိန်သြဂုတ် 27, 2012, တွင် THAT HTUN OO မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
8:15pm အချိန်သြဂုတ် 27, 2012, တွင် THAT HTUN OO မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:36pm အချိန်ဇူလှိုင် 9, 2012, တွင် ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။